အင်ဇိုင်းသည် ဇီဝဖြစ်စဉ်များတွင် ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ် ပါဝင်သော အသားဓာတ်ဖြစ်ပါသည်။ အများစုသော ဇီဝဓာတု ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စဉ်များတွင် အင်ဇိုင်းများပါဝင်ပါသည်။ အင်ဇိုင်းများသည် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် လိုအပ်သော အသားဓာတ်များကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် ပါဝင်ပါသည်။
↑ Smith AL (Ed) et al. (1997). Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology. Oxford [Oxfordshire]: Oxford University Press. ISBN 0-19-854768-4။
↑ Grisham, Charles M.; Reginald H. Garrett (1999). Biochemistry. Philadelphia: Saunders College Pub, 426–7. ISBN 0-03-022318-0။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အင်န်ဇိုင်း&oldid=473148" မှ ရယူရန်